ZoomGu- အရောင်းစက် Vending Machine 49 လက်မ Touch Advertising မျက်နှာပြင်
Zoomgu-Cone ရေခဲမုန့် အရောင်းစက် အအေးခဲအစားအစာ အရောင်းစက်
ဤသည်မှာ ကျွန်ုပ်တို့၏ အေးခဲထားသော အစားအစာ အရောင်းစက်ဖြစ်သည်။ လူစည်ကားသော လက်လီရောင်းချသည့်နေရာများ၊ အဆင်ပြေသောစတိုးဆိုင်များ သို့မဟုတ် ကြမ်းပြင်နေရာသည် ပရီမီယံအဆင့်ရှိသော မည်သည့်နေရာတွင်မဆို သင့်တော်ပါသည်။ လူတွေဟာ သူတို့ရဲ့ ထုတ်ကုန်တွေကို စက်ထဲကနေ ကောက်ယူဖို့ ငုံ့ခံနေစရာ မလိုတဲ့ စားသုံးသူတွေပါ။ ၎င်းသည် စားသုံးသူများ၏ လုပ်ငန်းဆောင်တာလိုအပ်ချက်များနှင့် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်သည်။ သင်၏စိတ်ကြိုက် Zoomgu စက်များကို ယနေ့ပဲမှာယူလိုက်ပါ။ ဤအကောင်းမွန်ဆုံး ကျန်းမာရေးနှင့်ညီညွှတ်သော ဈေးရောင်းစက်များကို ပိုင်ဆိုင်သည့်စက်မှုလုပ်ငန်းတွင် ပထမဆုံးဖြစ်လာပါ။
အရွယ်အစား: H: 1960 မီလီမီတာ, W: 1163 မီလီမီတာ, D: 944 မီလီမီတာ
1.49 လက်မအရွယ် ကြီးမားသော ထိတွေ့မျက်နှာပြင်၊ ပိုမိုကောင်းမွန်သော ဈေးဝယ်မှုနှင့် ကြော်ငြာအတွေ့အကြုံ၊
2. ခြုံငုံမြှုတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ကိုလက်ခံကျင့်သုံးသည်နှင့်လျှပ်ကာအလွှာ၏အထူသည် 80MM သို့ရောက်ရှိ; စက်တစ်ခုလုံး၏ စာရွက်သတ္တု ပစ္စည်းများအားလုံးကို သွပ်ရည်စိမ်ထားသော စာရွက်နှင့် သံမဏိများဖြင့် ပြုလုပ်ထားသည်။
3. ၎င်းသည် အပူချိန် ကာရံထားသော အတွင်းတံခါးပါရှိသော သီးခြား အအေးခံ module ကို လက်ခံရရှိပြီး ပတ်ဝန်းကျင် အပူချိန် 18° ဖြစ်သောအခါ အအေးခံသည့် အပူချိန်သည် -40° သို့ ရောက်ရှိနိုင်သည်။ (-25° စိတ်ကြိုက်လုပ်ရန် လိုအပ်သည်)
4. အမှီအခိုကင်းသောအပူချိန်ထိန်းချုပ်ကိရိယာ၊ အဝေးထိန်းကိရိယာ၊ WeChat မှ ပုံမှန်မဟုတ်သောအပူချိန်အတွက် အချက်ပေးအချက်ပြမှု။ အဝေးထိန်းခလုတ်ကိုဖွင့်နိုင်သည်;
5. အလေးချိန်ထောက်လှမ်းခြင်းနှင့် ကက်ဘိနက်အဖွင့်စောင့်ကြည့်ခြင်းတို့ကို အသုံးပြု၍ ဓာတ်လှေကားသည် ပို့ဆောင်ခြင်းနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းဖြစ်ပြီး ပို့ဆောင်မှုသည် တည်ငြိမ်၊ လုံခြုံပြီး မြန်ဆန်ပါသည်။
အရွယ် H: 1960 မီလီမီတာ, W: 1163 မီလီမီတာ, D: 944 မီလီမီတာ
ငွေပေးချေမှုရမည့်စနစ် Bill, Coin, Coin Dispenser (MDB Protocol)
အလေးချိန် 400 ကီလိုဂရမ်
အပူအအေး UP to -18°C(adjustable)
ရွေးချယ်မှုများ 54 အမျိုးအစားများ
power supply AC 100V/240V, 50/60HZ
စွမ်းဆောင်ရည်မြှင့် 225-260 PCs
စံ interface ကို MDB / DEX / RS232
ပါဝါပုံမှန် 45 ဒဗလျူ 465 W ကရေခဲသေတ္တာ
ရွေးချယ်နိုင်သော Wechat QR Pay၊ Ali QR Pay၊ အဖွဲ့ဝင်ကတ်/ IC ကတ် ငွေပေးချေမှု လုပ်ဆောင်ချက်များ
applications ကို ကျောင်း၊ ဘဏ်၊ ရုံးခန်း၊ စက်ရုံ၊ ပန်းခြံ၊ မြေအောက်ရထား ဘူတာရုံ၊ လေဆိပ်၊ ဟိုတယ်၊ ဆေးရုံ၊ ရှော့ပင်းမောလ် စသဖြင့်၊